တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်း - Hello Sayarwon
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဟာ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးဖို့ အလားအလာများလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်ရိုးရဲ့ အထက်ပိုင်းလေးပုံတစ်ပုံမှာ အရိုးကျိုးခြင်းကို တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းလို့ခေါ်ပြီး အရိုးကျိုးတဲ့ အတိုင်းအတာကတော့ အားသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းဟာ သာမန်အရိုးကျိုးတဲ့ ပြဿနာသက်သက် မဟုတ်ဘဲ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးတဲ့အခါ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရဖို့များတဲ့အပြင် ပြန်ကောင်းလာဖို့လည်း တစ်နှစ်လောက် အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကာယကုထုံးအကူအညီနဲ့ ကျိုးသွားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေ ပြန်လည်သန်မာလာအောင်၊ ပြန်လည်လှုပ်ရှားနိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ
အသက်အရွယ်ကြီးလာလေ ခန္ဓါကိုယ်က အရိုးအဆစ်တွေ အားနည်းလာလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနိုင်ချေ ပိုများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ဟန်ချက်ထိန်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အမြင်အာရုံအားနည်းခြင်း၊ အမျိုးစုံသောဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရခြင်း စတဲ့အချက်တွေက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ချော်ကျ၊ လဲကျစေနိုင်ပြီး တင်ပါးဆုံးရိုးကျိုးစေနိုင်ပါတယ်။
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကတော့
မိသားစုဝင်များတွင် အရိုးကျိုးဖူးသည့် ရာဇဝင်ရှိခြင်း
အရိုးသန်မာရန်လိုအပ်သည့် ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့် ဗီတာမင်ဒီ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
လူကို မူးဝေစေသည့် ဆေးဝါးများ၊ ဟန်ချက်ထိန်းရန် ခက်ခဲစေသည့် ဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရာတွင် အခက်တွေ့စေသည့် အဆစ်ရောင်ရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါများ ခံစားနေရခြင်း
လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း (လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့ ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်ကို သယ်ဆောင်ရသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းက အရိုးများကို သန်မာစေပါတယ်)
အချို့သောဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရခြင်း (ဥပမာ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါများအတွက် စတီးရွိုက် ကြာရှည်အသုံးပြုနေရခြင်း)
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ
တင်ပါးဆုံကို အလွယ်တကူ မကွေးနိုင်၊ မလှည့်နိုင်တော့ခြင်း
တင်ပါးဆုံ သို့မဟုတ် ပေါင်ခြံတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား နာကျင်ခြင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်ခြေထောက်ကို အားပြု၍ မထောက်နိုင်ခြင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်ခြေထောက်မှာ အပြင်ဘက်သို့ လည်ထွက်နေခြင်း
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနိုင်ချေကို မြင့်စေသည့် အရာများ
အောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနိုင်ချေ မြင့်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ဟန်ချက်ထိန်းရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် အမြင်အာရုံပြဿနာကြောင့် ချော်လဲကျလွယ်ခြင်း
အရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် ကြွက်သားအစိုင်အခဲ လျော့နည်းလာခြင်း
အမျိုးသမီးတွေဟာ ရာသီသွေးဆုံးချိန်မှာ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း ရုတ်တရက်ကျဆင်းမှုကြောင့် အမျိုးသားတွေထက်စာရင် အရိုးသိပ်သည်းဆလျော့နည်းမှု ပိုမိုလျင်မြန်လေ့ရှိပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဒီပြဿနာမျိုး ကြုံရနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။
နာတာရှည်ရောဂါများ၊ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ဗီတာမင် ဒီနဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ စတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့် အရိုးအားနည်းပြီး တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနိုင်သလို သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလုပ်လုပ်လွန်းခြင်းကလည်း အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အချို့သောဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရခြင်း – prednisone ကဲ့သို့ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်တွေကို ရေရှည်စွဲသုံးခြင်းက အရိုးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အာဟာရဆိုင်ရာ ပြဿနာများ – ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို လုံလောက်စွာ မစားသုံးဘူးဆိုရင် အရိုးသိပ်သည်းဆ နည်းပြီး အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ အရိုးကျိုးဖို့ အလားအလာ ပိုများပါတယ်။
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းက သင့်ကို အမှီအခိုမကင်း ဖြစ်စေသလို သင့်ရဲ့ ဘဝသက်တမ်းကိုပါ တိုတောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာကြာ မလှုပ်ရှားဘဲ နေရာကတဆင့် အောက်ပါ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခြေထောက်နှင့် အဆုတ်ထဲ သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း
နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ရရှိခြင်း
ကြွက်သားများသိမ်လာပြီး ချော်လဲနိုင်ချေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ချေ ပိုများလာခြင်း
သင့်အနေနဲ့ အရိုးအဆစ်တွေသန်မာအောင် ထိန်းသိမ်းပြီး ချော်လဲမကျအောင် အထူးသတိထားခြင်းအားဖြင့် တင်ပါးဆုံရိုးမကျိုးအောင် ကာကွယ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hip-fracture/basics/complications/con-20021033. Accessed9November, 2016
Hip Fracture – Topic Overview http://www.webmd.com/osteoporosis/tc/hip-fracture-topic-overview?page=2. Accessed9November, 2016
Hip Fractures http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00392. Accessed9November, 2016